MXF ka MP4 Ntụgharị: Olee otú iji tọghata MXF ka MP4 Mfe
MXF dị mkpụmkpụ nke ihe onwunwe Exchange Format, tumadi ji na ọkachamara dijitalụ camcorders dị ka Sony XDCAM, Panasonic HVX200, Canon XF305 / XF300 / XF100 wdg na-echekwa video, ọdịyo na kenyere data. MXF faịlụ ndị ike n'ihi na ọrụ na na na ọtụtụ media Player ma ọ bụ ngwaọrụ, na-esikwa ike dezie na ụfọdụ bụ isi video edezi software dị ka Windows Movie Onye kere na iMovie wdg Otú ọ dị, ị nwere ike igwu na dezie MXF faịlụ ọzọ mfe site n'ịtụgharị MXF usoro ndị ọzọ na-ewu ewu formats. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ igwu MXF faịlụ na Galaxy, Blackberry, Zune, iPhone, iPad, iPod, wdg, ị nwere ike tọghata MXF ka MP4 n'ihi na ọrụ.
Isiokwu a tumadi na-elekwasị anya otú iji tọghata MXF footage faịlụ ka MP4 maka ịkpọ MXF faịlụ ndị ọzọ ọtụtụ ebe. Ime ya, ị ga-ahụ a ọkachamara MXF ka MP4 Ntụgharị. Ebe a, Wondershare Video Ntụgharị na-ike na-atụ aro. Ọ bụghị nanị na pụrụ inyere gị aka ịgbanwe gị MXF faịlụ ka MP4 faịlụ na ala, kamakwa nwere ikike ka ị na-egwu MXF faịlụ na ọ bụla na-ewu ewu MP4 mgbasa ozi ọkpụkpọ ma ọ bụ ngwaọrụ na mbụ video mma. Ihe niile ị chọrọ ime bụ nnọọ họrọ kachasị presetting n'ihi na gị ọkpụkpọ ma ọ bụ ngwaọrụ.
Ọzọ, Aga m ewere MXF ka MP4 akakabarede ihe atụ na-egosi gị otú ị uku a ngwa-arụ ọrụ. Mgbe akakabarede, ị nwere ike igwu gị MXF faịlụ n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla.
1 Import MXF videos ka MXF ka MP4 Ntụgharị
Ẹkedori a MXF ka MP4 video Ntụgharị, akpali gị òké na "Tinye Files" button, wee pịa ya. A mmapụta window ga-eduga gị ịchọta gị Obodo MXF faịlụ, na-esote, dị nnọọ mara ha a ngwa si ebi ndụ. Ụzọ ọzọ i nwere ike tinye WTV faịlụ bụ ịchọta ndị a lekwasịrị faịlụ na PC na mgbe ahụ ịdọrọ ha ka ha ngwa a.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ iji tọghata multiple MXF faịlụ n'ime otu faịlụ, na oge, ị dị nnọọ ịgbanwe ndị a kwukwara faịlụ dị ka play iji, na mgbe ahụ enyere ndị "jikota niile videos n'ime otu faịlụ" nhọrọ na ala.
2 Họrọ MP4 dị ka mmepụta format
Bugharịa òké na "mmepụta Format" ebi ndụ nke usoro ihe omume window, ebe ị chọrọ pịa format image icon ma ọ bụ dobe-ala format ndepụta. Na-esonụ mmepụta format window, ị nwere ike họrọ MP4 si "Format" Atiya> "Video" subcategory.
Cheta na: (Nhọrọ) Mgbe ala nke "mmepụta Format" ebi ndụ, ị nwere ike pịa "Mwube" nhọrọ ka encoder, etiti ọnụego, mkpebi, bitrates, wdg
Ọ bụrụ na ị tọghata MXF faịlụ ka MP4 nanị maka playback na ngwaọrụ gị dị ka iPhone, iPad, Apple TV, wdg, na ị ga-mma họrọ kpọmkwem-kachasị mmepụta formats, maka mmepụta faịlụ ga-dabara ha kasị mma.
3 hazie gị video faịlụ (Nhọrọ)
Ọ bụrụ na ị nanị pịa "Dezie" ke menu mmanya, ị nwere nhọrọ ewepụtụ, akuku, mmetụta, tinye watermark na sobtaitel wdg
4 Malite MXF ka MP4 akakabarede
Pịa "tọghata" button na-amalite MXF ka MP4 video akakabarede. Nke a green ọganihu mmanya ga-egosi gị akakabarede ọsọ. Ị ga-ahụ nke a ngwa nwere ike ịrụcha converson nnọọ ngwa ngwa.
Mgbe akakabarede, chọta mmepụta faịlụ dị ka ya mmepụta ụzọ ma ọ bụ site na ịpị Open nchekwa nhọrọ. Ugbu a, dị nnọọ nwere a fun! (Cheta: N'ihi na ngwaọrụ, i kwesịrị nyefee faịlụ na ngwaọrụ.)
Olee otú iji tọghata MXF ka AVI ọsọ ọsọ na mfe
> Resource> Video> Olee otú iji tọghata MXF ka MP4